“Afrobasket 2021” :: Azon’i Madagasikara ny tapakila amin’ny dingana manaraka • AoRaha
Fahombiazana. Fandresena hatramin’ ny voalohany ka hatramin’ny farany no vokatra azon’ny ekipam-pirenena malagasy nandritra ny dingana fifanintsanana tamin’ ny fifaninanana “Afrobasket 2021”, tany Harare (Zimba­boe), tamin’iny herinandro lasa iny. Azontsika, vokatr’ izany, ny tapakila hiatrehana ny dingana manaraka, amin’ ny 21 – 23 febroary 2020.
Azo heverina ho nety ny nangalana an’ireo mpilalao miara-milalao ao amin’ny ekipan’ny Zandarimariam-pirenena malagasy na ny GNBC handrafitra ny antsa­saky ny ekipa ka nahazoantsika an’ireo fandresena efatra ireo. Tafita ao amin’ny vondrona A ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny fifandonana manaraka ka hiaraka amin­tsika amin’izany i Tonizia, ny Repoblikan’i Centrafrique ary ny Repoblika Demokratikan’i Congo (RDC).
Fandresena indroa avy
Namarana ny lalaony tamin’ny fandresena fanindroany ny firenena mpampi­antrano ireo mpilalao Malagasy, tany Zimbaboe, tamin’ny sabotsy lasa teo. Lavontsika tamin’ny isa 69 noho 62 ny ekipan’i Zimbaboe. Niady hatramin’ny farany ny lalaon’ny ekipa roa tonta sady nitarika tamin’ny isa tokana ny mpifanandrina tamin’i Madagasikara (20-19), nandritra ny am­pahefa-potoana voalohany. Isa efatra kosa no nanasaraka antsika sy izy ireo, mialoha ny fialan-sasatra (29-25). Mafy ny lalao ka tany amin’ ny fizaram-potoana faharoa vao nitarika ny ekipan-dRaharidera Lova.
Tsy mora ny nahazoan’ ireo mpilalao malagasy an’ity fandresena fahefatra ity raha toa nanjakazakantsika tamin’ny isa 74 noho 57 izy ireo nandritra ny lalao mandroso. Tsiahivina ihany koa fa efa nandavo an’i Zambia indroa nisesy ny ekipam-pirenena malagasy. Nisaraka tamin’ny isa nitovy, 84 sy 84, ny roa tonta teo amin’ny fe-potoana ara-dalana tamin’ny lalao mandroso ka voatery niditra tamin’ny fana­lavam-potoana. Resintsika tamin’ny isa 91 noho 98 ihany izy ireo, tamin’ny fiafaran’ny lalao. Nazava kosa ny fandresena azontsika tamin’ny fihaonana faharoa (93 – 59). Ny ekipan’ny mpa­mpiantrano kosa no nahazo ny laharana faharoa, raha tany amin’ny laharana faha­telo i Zambia.
Haiady “pancrace” :: Miandry ireo klioba roapolo ny fifaninanam-pirenena